21-11-2015 Xamar Radio
Magaalada Batam ee dalka Indonisia ayaa ah magaalada ugu koritaanka badan caalamka sida ay shaacisay hay’ada Demographia World Urban Areas ee fadhigoodu yahay dalka Maraykanka.
Hay’adan oo xisaabisa heerka koritaanka magaalooyinka dadkoodu ka badan yahay hal Malyan oo ruux ayaa Magaalada Xamar ku sheegtay inay tahay magaalada 2aad ee caalamka ugu koritaanka badan leh.
Magaalada Batam ayaa waxaa ku nool dad gaaraya 1.1 million tirakoobkii iugu dambeeyay, waxana kororka magaalada lagu qiyaasay boqolkiiba 7.4% muddo sanad ah. Magaalada Labaad ee ugu koboca badan leh caalamka ayaa lagu sheegay in ay tahay Magaalada Xamar Caasimada dalka Soomaaliya taasoo lagu sheegay tirada ku nool inay gaareyso 2.1Milyan iyadoo koboca magaaladana uu yahay 6.9%.
Hay’adan ayaa koritaanka magaalada Xamar ku macneysay inay u sabab tahay ammaanka oo soo wanaagsanaaday iyo rajo dhaqaale oo ka jirta magaalada hore ugaga guuray. ayna qoysas badan dib ugu soo laabteen magaalada.